Home Wararka Dowladda Shabab Dir baa madax ka ah. “Daawo”
Buur madow ah oo oday u soo shaqo tagay Koofurta Soomaaliya oo ka hadlaayay xaflad aay u sameeyeen Dirta Waqooyi ayaa sheegay in yahay shaqsiga kaliya ee u tacsiyadeeyay markii uu dhintay Amiirkii Shabab Axmed Godane.
Wuxuu sheegay in lagu xanto in Dirta aanay lahayn hami siyaasadeed oo weyn, balse wuxuu taa uga jawaabay “Laba dowladood baa Koofurta ka dhisan, Waxaana dhaqaalaha DF maamula waa DIR, waxa kale oo Dowladda Shabab Madaxweyne ka ah waa DIR” Isagoo ula jeeda beesha Isaaq.
Waxaa inta badan la sheegaa in Shabab aay maal geliyaan Somaliland, waxaana uu Buur Madow ka marqaati furay in aay arrintaasi tahay mid run ah, oo maamulka Soomaaliland uu ka warqabo Shabaabka.
Ma dhicin maalin kaliya oo aay kooxda Shabab qaraxyo ka geysteen Waqooyiga Soomaaliya, waxaana aay gummaadaan shacab gobolada Koofureed iyo Gobolka Bari.
Previous articleMaama Seynab oo Beesheeda U soo wada Saartay Xildhibaandooda iyo Kheyre oo Qatar looga yeeray.
Next article[Daawo] Xiisadda ciidamada PSF iyo Deni oo meel sare gaartay
Waa sidee xaalada Magaalada Dhuusa-mareeb ka dib Dagaalkii Xalay Dhacay